Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo soo jeediyey in la dhimo kharajiyaadka xukuumadda • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo soo jeediyey in la dhimo kharajiyaadka xukuumadda
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya oo soo jeediyey in la dhimo kharajiyaadka xukuumadda
December 23, 2012 - By: Hanad Askar
Baarlamanka Soomaaliya oo soo jeediyay in Kharash Dhimis lagu sameeyo Dakhliga miisaaniyad ahaan ku baxaya Xafiisyada Madaxtooyada, Xafiiska R/Wasaaraha, Arrimaha Gudaha iyo Safaaradaha.
Kulan ay Magaalada Muqdisho maanta oo Axad ah ku yeesheen Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayey kaga doodeen arrimo muhiim ah oo ku saabsan Miisaaniyadda Dalka waxaana kulanka shirguddoominayay Guddoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamanka iyadoo guddiga Maaliyadda Baarlamanka ay talo kusoo jeediyeen in Kharash dhimis lagu sameeyo Xafiisyada Madaxtooyada,R/Wasaaraha,safaaradaha,Wasaaradda arrimaha Gudaha iyo Keydka kaabidda.
Sidoo kale Xildhibaanno tiradooda ay gaareyso 51-Mudane ayaa Motion ku saabsan in 25-ka wasiiru Dowle iyo ku xigeennada la horkeenno Baarlamanka u gudbiyay Guddoonka sare ee Baarlamanka.
Sidoo kale Mudaneyaasha Baarlamanka qaarkood ayaa soo jeediyay in la helo oo la ogaado Dakhliga ay soo saaraan Wakaaladaha howlaha Maraakiibta,hay’adda Duulista iyo saadaasha Hawada iyo Fiisha baraa.
Guddiga maaliyadda ayaa sidoo kale waxa uu talo kusoo jeediyay in dib loo dhigo ilaa sanadka 2014-ka qorshihii uu Baarlamanka ku doonayay in Gunnada Xildhibaanka ay noqoto 3,600 Dollar iyadoo Xukuumaddu sanadkan 2013-ka u qoondeysay Xildhibaankii lacag dhan 2,740 Dollar. Talo soojeedintan ayaa u muuqata in Xildhibaanada ay ayagu sare u qaadeen gunadooda halka ay talo kusoo jeediyeen in hoos loo dhigo kharashaadka ay qoondeysteen Xafiisyada Xukuumada.
Qarashaadka ku baxaya Xafiisyada uu Baarlamanka soo jeediyay in la dhimo ayaa waxa ay kala yihiin :-
1.Xafiiska Madaxtooyada oo ay Xukuumaddu u qoondeeysay Miisaaniyadda 2013-ka lacag dhan $3,287,724 .
2.Xafiiska R/wasaaraha oo ay xukuumaddu u qoondeysay miisaanidda 2013-ka lacag dhan $2,400,000.
3.Wasaaradda arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka oo ay Xukuumaddu u qoondeysay lacag dhan $17,325,504.
4.Safaaradaha oo loo qoondeeyay markii hore lacag dhan $4,480,680.
5.Keydka kabidda oo ay ku baxeyso lacag Dhan $6,300,000.
Lama oga waxa ay ka bedeli doonto Xukuumadda Soomaaliya Talo soo jeedinta Baarlamanka inkastoo kulankii Baarlamanka uu goobjoog ka ahaa wasiirka Maaliyadda iyo Qorsheynta waxaana sidoo kale la filayaa in Go’aan laga soo saaro in Wasiiru Dowleyaasha iyo ku xigeennada la horgeeyo Baarlamanka iyo in kale maadaama uu ku jiro ajendaha Kulanka Isniinta.
RW ku xigeen Mahdi guuleed oo Jabuuti uga qeyb galay shir ku saabsan isbedelka Geeska-Sawiro
Madaxweyne Gaas oo kulan la yeeshay Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil-Sawiro
Maxay kawada hadleen Kheyre iyo Amiir Tamim Bin Hamad
Inka badan 130 xildhibaan oo kulan ay ku taageerayaan Farmaajo ku yeeshay Muqdisho